South Korea BANS Farshaxanimo Anime, oo loogu yeero 'Xadgudubka Caruurta' - Kale
South Korea BANS Faahfaahin Anime & Manga Art, Sheegashooyin Waa 'Xadgudubka Caruurta'
2019 waa sanad waali ah anime.
Waxaan ku waayey tirinta intee cadho, loo maleynayo 'mamnuucid' iyo isku day lagu waxyeeleynayo warshadaha ayaa dhacay.
Waa kaftan ordaya xilligan.
Haatanna wararkii ugu dambeeyay ayaa ah maxkamadda sare ee Kuuriyada Koofureed ayaa xukuntay in la mamnuuco farshaxanka anime ee soo jeedinaya galmada. Taas waxaa ka mid ah sawirada anime iyo naqshadaha gabdhaha da'da yar.
Xaqiiqdii - maxkamadda sare ee Kuuriyada Koofureed ayaa aad ugu fogaatay in la yiraahdo waxaa loo arkaa xadgudub cunug.
Hal nin ayaa lagu ganaaxay in ka badan £ 3000 + ka faa'iideysiga hentai anime muddo ka badan 3 sano.
Maxkamadihii 'hoose' waxay ku dhawaaqeen inay 'caqli gal ahayn' in dacwad lagu soo oogo Lim (farshaxanka) oo lagu eedeeyay faafinta sawirada caruurta si xun loola dhaqmay sababtoo ah jilayaasha kartoonada ah waxay xirnaayeen dharka iskuulka waxayna leeyihiin 'muuqaal dhalinyaro ah'.
Maxkamaddii sare ee sare ayaa dib u soo laabatay oo wuxuu ku yidhi sidan:
Marka la fiiriyo shaqsi caadi ah bulshadeena, waxyaabaha ku jira fiidiyowyada ayaa muujinaya waxa loo arki karo dhalinyaro ahaan. ”
Tan macnaheedu waa wax kastoo anime la xiriira Koonfurta Kuuriya
Farshaxanno anime kasta, Mangaka's, ama istuudiyaha sameeya ama ku lug yeelaya anime waxaa laga yaabaa inay gacmahoodu xirmaan.
Xitaa tilmaanta ugu yar ee gabadha 'da 'yar' ee naqshadeynta ah (ha ahaato mid galmo ahaan u soo jeedinaysa iyo haddii kaleba) waa la faaf-reebi doonaa, waa lala socon doonaa, xitaa waad la kulmi kartaa eedeymo waana lagu xiri karaa.
Arrin la yaab leh - tani ma tirinayso loogu talagalay jilayaasha labka muuqaalkiisa.
Yaa og - way isbeddeli kartaa. Laakiin uma badna in la tixgeliyo sida ay Kuuriyada Koofureed ugu adkaan karto waxyaalahan.
waxay muujineysaa sida kalgacalka franxx
Isha warka: Telegraph
72% Dhalinyarda Jabbaan waxay isku tixgeliyaan inay yihiin OTAKU (Poll)
Tani waa sababta Animators-ka Jabbaan u yihiin kuwa aan mushahar ka helin
10 anime ugu fiican waqtiga oo dhan
liiska taxanaha anime ee ugu fiican si loo daawado